Xaggee ayey ku dambeysay Dacwaddii Mahad Abiib oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo ay Dowladda Norway Dhalashii Waddankeeda kala laabtay?
Home » Qormooyinka » Xaggee ayey ku dambeysay Dacwaddii Mahad Abiib oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo ay Dowladda Norway Dhalashii Waddankeeda kala laabtay?	Xaggee ayey ku dambeysay Dacwaddii Mahad Abiib oo ah muwaadin Soomaaliyeed oo ay Dowladda Norway Dhalashii Waddankeeda kala laabtay?
25/02/2017	2,205 Views Maxkamadii Mahad Abib uu dawladda Norway ku soo oogay oo magaalada Oslo ka soconaysay afar maalmood ayaa la soo afjaray jimicihii iyadoo jawaabtuna soo bixi doontaa muddo laba todobaad gudohooda ah. Xeer ilaayiha dawlada ayaa ku adkaysanaya in Mahad ka soo jeedo dalka Djibouti oo uu been ka sheegay sheekadiisii mangelyo doonka iyo dariiqii uu soo maray imanshihiisii Norway. Dawlada Djibouti ayaa iyaduna qoraal ku cadaysay in aanu Mahad u dhalan dalkooda. Qareenka sare ee caanka ah Arild Humlen oo difaacayay Mahad Abib ayaa hor Keenay maxkamada cadaymo waafi ah iyo markhaatiyo aqoon iyo xirfad gaar ah u leh dhinaca barbaarinta dhallinta isla markaana qayb ka ahaa barbaarintii Mahad Abib ee Norway.
Qareen Sare Humlen ayaa sheegay inay dawlada Norway jebisay dastuurka Norway markii ay Mahad ka dhigtay qof aan dal lahayn “statsløs”. Qareenka ayaa maxkada ka dalbaday in si shuruud la’aan ah loogu soo celiyo Mahad jinsiyadiisii noorwiijiga ee ay dawladu hore ugala noqotay. Injineer Mahad ayaa si wayn ugaga Mahad celiyay soomalida reer Norway, asxaabtiisa noorwiijiga ah iyo intii kale taageerada hiilka iyo hooga ah la garab taagan mar walba. Haddaba gari laba nin kama wada qosliso goaannka maxkamda ayaa soo bixi doonaa lab todobaad gudohood.
Mahada Abiib ayey Dowladda Norway Dhalashadii kala laabatay Sanadkii hore markii laga shakiyey halka uu kasoo jeedo, waxayna Ha’yadda socdaalka ee Norway sheegtay inuu kasoo jeedo Dalka Jabuuti, uuna ka been sheegay. Mahad ayaa waddanka yimid isaga oo 14 jir ah wuxuu jaamacad kaga baxay Dalka Norway.
Waxaa Qoray: Xildhibaan Baashe Muuse oo ka tirsan Golaha deegaanka ee magaalada Oslo.
Previous: Wariye Cabdi maalik Muuse Coldoon oo maanta Maxkamad la soo taagayo..
Next: dhageyso: Xaaladda Maxaabiis ku xiran xabsiga weyn ee Boosaaso oo xaaladooda caafimaad laga deyrinayo..
INDHAHA WADDANIGOW ARKA BASAASKA!. W/Q/Bashiir Cali Xuseen(Barbaariye)
JIMCE MACAAN & KAFTAN MUDAN. W/Q: Bashiir Cali Barre
Dhaqan Ku Gabbo, Diintana Ka Gabbo Waa Garaad Li’i.! W/Q: Ibraahim Cusmaan Afrax
Xasan, Formaajo iyo Afgooye: W/Q: Bashiir Maxammad Xersi
Xasan, Formaajo iyo Afgooye. Xasan wuxuu degmada Afgooye tagay labo mar intii uu xilka hayey, ...
WAASUGE IYO WARSAME: (Socdaalkii 30ka Maalmood), waxaa qoray:Dr.Xuseen Sheekh Axmed (kaddare)
Alle ha u naxariistee Dr.Xuseen Sheekh Axmed (Kaddare), wuxuu ka mid ahaa Qorayaashii Farta Soomaaliga. ...